Trondro am-bifotsy, ozinina hazan-dranomasina - trondro vita am-bifotsy, mpanamboatra hazan-dranomasina ary mpamatsy
Rano fitifirana rano
Sided Spray Retort
Rano fisitrihana rano
Famafazana rano sy famerenana Rotary
Fandrobohana rano sy valisoa Rotary
Steam sy Rotary Retort
Rafitra famerenam-bidy tsy misy volo
Rafitra famerenam-bidy mandeha ho azy
Sterilizer Hydrostatic mitohy
Fantsona roa sosona
Pad amin'ny sosona hybrid
Famerenana amin'ny laoniny ny famerenana angovo
Asehoy ny Dynamic
MANOKANA AMIN'NY FOMBA FANDAMINANA • MIFOKA AMIN'NY FARAN'NY Avo
Trondro am-bifotsy, hazandranomasina
Ny valiny hafafin'ny sisiny
Fanamafisana ny rano amin'ny famafazana rano Retort
Mafana sy mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny mpanova hafanana, ka tsy handoto ny vokatra ny etona sy ny rano mangatsiaka ary tsy mila akora simika fitsaboana rano. Ny rano mandeha dia apetaka amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny paompin-drano sy ny vazaha nozaraina tao amin'ny retort mba hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization. Ny mari-pana marina sy ny fanaraha-maso ny tsindry dia mety amin'ny vokatra fonosana isan-karazany.
Mafana sy mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny mpanova hafanana, ka tsy handoto ny vokatra ny etona sy ny rano mangatsiaka ary tsy mila akora simika fitsaboana rano. Ny rano mandeha dia alefa mitovy amin'ny ambony ka hatrany amin'ny alàlan'ny paompin-drano mikoriana sy ny takelaka mampisaraka rano eo an-tampon'ny retort mba hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization. Ny mari-pana marina sy ny fanaraha-maso ny tsindry dia mety amin'ny vokatra fonosana isan-karazany. Ny toetra tsotra sy azo antoka dia mahatonga ny DTS sterilization retort ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny zava-pisotro sinoa.
Mafana sy mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny mpanova hafanana, ka tsy handoto ny vokatra ny etona sy ny rano mangatsiaka ary tsy mila akora simika fitsaboana rano. Ny rano fanodinana dia hafafiny amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny paompin-drano sy ny vazaha nozaraina amin'ny zoro efatra amin'ny fitoeram-bokatra tsirairay hahazoana ny tanjon'ny sterilization. Izy io dia miantoka ny fitovian'ny maripana mandritra ny dingana fanafana sy fampangatsiahana, ary mety indrindra amin'ny vokatra fonosina ao anaty kitapo malefaka, indrindra amin'ireo vokatra mora tohina.
Ny rano manitrika rano dia mampiasa teknolojia fanodinana rano tsy manam-paharoa hanatsarana ny fitovian'ny hafanana ao anaty sambo. Ny rano mafana dia voaomana mialoha ao anaty fitoeran-drano mafana hanombohana ny fizotran'ny fanamorana amin'ny hafanana ambony ary hahatratra ny fiakaran'ny maripana haingana, aorian'ny fanamontsamontsana, ny rano mafana averina averina ary averina amin'ny tanky mafana mba hahatratrarana ny tanjon'ny fitsitsiana angovo.
Ny tsipika fanamafisam-peo tsy miverimberina mitaky crateless dia naharesy ny tavoahangy teknolojika isan-karazany amin'ny indostrian'ny fanaingoana ary mampiroborobo an'io fomba io eny an-tsena. Ny rafitra dia manana teboka teknika avo lenta, haitao mandroso, effet sterilization tsara, ary firafitra tsotra an'ny rafitra orientation can aorian'ny sterilization. Afaka mamaly ny fitakiana fanodinana mitohy sy famokarana betsaka.
Ny saturated Steam Retort no fomba tranainy indrindra amin'ny sterilization anaty fitoeran-javatra ampiasain'ny olombelona. Ho an'ny fanamainana vita amin'ny tin dia io no karazana valin-kafatra tsotra sy azo antoka. Izy io dia voajanahary amin'ny dingan'ny fanesorana ny rivotra rehetra amin'ny valiny amin'ny alàlan'ny fanondrahana etona ny sambo ary mamela ny rivotra hitsoaka amin'ny valves vent. Tsy misy famoretana mandritra ny dingan'ny fanafoanana io dingana io, satria tsy mahazo miditra ny rivotra sambo amin'ny fotoana rehetra mandritra ny dingana fanamorana. Na izany aza, mety misy ny famerenam-bidy mandritra ny dingana mangatsiaka hisorohana ny fahasimban'ny kaontenera.
Rafitra sterilizer hydrostatic mitohy
Ny rafitra sterilizer hydrostatic mitohy dia noforonina arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny fizotry ny famokarana manontolo, manomboka amin'ny famatsiana akora ka hatramin'ny famolavolana teknika, ny famokarana, ny fitantanana kalitao ary ny fametrahana eo an-toerana sy ny fanirahana azy dia tarihina, arahi-maso ary ampiofanan'ireo injeniera matihanina. Ny orinasanay dia manolotra teknolojia mandroso sy talenta matihanina avy any Eropa. Ny rafitra dia manana ny mampiavaka ny asa mitohy, fandidiana tsy voafehy, fiarovana avo lenta, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fironana amin'ny fikarakarana sakafo dia ny miala amin'ny sambo kely miverina mankany amin'ny akorandriaka lehibe kokoa hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra sy ny fiarovana ny vokatra. Ny sambo lehibe kokoa dia manondro harona lehibe kokoa izay tsy zaka tanana. Ny harona lehibe dia be loatra ary mavesatra loatra ka tsy afa-mivezivezy ny olona iray.
Adiresy: faritra indostrialy dts, zhucheng, faritanin'i shandong, pr china
Telefaona: +86 536-6549353